SPC Smart Ultimate, ezigbo nhọrọ dị oke ọnụ ahịa | Ngwa akụkọ
SPC Smart Ultimate, ezigbo nhọrọ dị oke ọnụ ahịa
Miguel Hernandez | 28/03/2022 10:00 | General, Mobiles, Nyocha, Telephony
Anyị na-alaghachi SPC, ụlọ ọrụ na-eso anyị na ọtụtụ nyocha n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ ezie na oge a anyị nwere ohere ịhụ ngwaọrụ nke bụ eleghị anya ọ bụghị akara kacha ike nke ika nke azụmahịa, ma nke na-adịghị ewute icheta, anyị na-ekwu banyere smartphones.
Anyị na-enyocha SPC Smart Ultimate ọhụrụ, nhọrọ akụ na ụba yana ihe niile ịchọrọ maka ndụ kwa ụbọchị yana nnwere onwe dị ukwuu maka ndị na-eche maka ọnụahịa.. Chọpụta njirimara nke ọdụ ụgbọ elu SPC ọhụrụ a ma ọ bụrụ na ọ na-edobe onwe ya dị ka ihe ọzọ dịka ọnụahịa ya si dị.
1 Nhazi: Ọnụ na ịdịte aka kwa ọkọlọtọ
4 Ndị kamera
Nhazi: Ọnụ na ịdịte aka kwa ọkọlọtọ
Nke mbụ, anyị na-achọta ahụ plastik, ihe na-eme n'azụ, ebe anyị nwere ihe mkpuchi nke ejiri okpukpu abụọ mee ihe na-enye anyị ohere ịnye njide ka ukwuu na ọdịdị anya, gịnị mere na ị gaghị ekwu ya, ihe ọzọ na-atọ ụtọ. Fejiri plastik ojii pristine mee n'azụ, Ihe niile a ma ama ka dị maka ihe mmetụta na ọkụ ọkụ LED.
Nha: 158,4 × 74,6 × 10,15
Ibu ibu: 195 grams
Akụkụ nke elu maka jakị 3,5mm ka dị, ebe n'akụkụ ala anyị nwere ọdụ ụgbọ USB-C nke anyị ga-esi na-ebu ebubo. Bọtịnụ ugboro abụọ na profaịlụ ekpe maka olu na bọtịnụ "ike" n'akụkụ aka nri nke, n'uche nke m, nwere ike ime ka ọ dị ntakịrị. Ekwentị ahụ nwere nnukwu nha yana ibu so ya, mana ọ na-adị ya nke ọma na-egosi na ọ nwere ọkwa dị mma nke iguzogide oge na mmetụta.
N'ihi na nke ikpeazụ anyị nwere ihe mkpuchi silicone nke etinyere na ngwugwu ahụ, yana eriri nchaji, ihe nkwụnye ọkụ na n'ezie ihe nkiri nchebe maka ihuenyo nke na-abịa arụnyere. Nhazi nke na-ahapụ ka ọ gaa, nwere okpokolo agba akpọpụtara n'ihu yana igwefoto "ụdị dobe".
Nke a SPC Smart Ultimate na-eso ihe nhazi Quad Core Unisoc T310 2GHz, ihe dị iche na nke anyị na-eji na-ahụ nke ọma Qualcomm Snapdragon na n'ezie MediaTek. Kedu ihe ọzọ, Ọ na-esonyere 3GB nke LPDDR3 Ram. na n'ime ule anyị ọ kwagara nke ọma na ngwa ndị a na-ahụkarị na RRSS, ọ bụ ezie na o doro anya na anyị enweghị ike ịrịọ maka mgbalị nke, n'ihi ikike, ọ gaghị ekwe omume ime ya.
Ọ nwere IMG PowerVR GE8300 GPU ezuru iji mee ka eserese nke ngwa ndị ahụ e kwuru n'elu yana interface onye ọrụ, na-adịghị na-enye ọrụ a na-anabata nke ọma na egwuregwu vidio dị arọ dị ka CoD Mobile ma ọ bụ Asphalt 9. Maka nchekwa, anyị nwere 32GB nke ebe nchekwa dị n'ime.
Ọ nwere USB-C OTG
Ngwa ngwa ngwa a niile na-arụ ọrụ na gam akporo 11 na ụdị dị ọcha nke ukwuu, ihe a na-akwanyere ùgwù, na-apụ na ụdị ndị ọzọ dị ka Realme na-ejupụta ihuenyo anyị na adware, ihe na-adị gị ka ndị na-eso m ogologo oge. ka m bụrụ mmejọ na-enweghị mgbaghara.
Nke a pụtara na eeAnyị ga-ahụ naanị ngwa Google gọọmentị iji rụọ ọrụ sistemụ nke ọma, yana ngwa gọọmentị nke SPC.
N'ogo nke njikọta anyị ga-enwe netwọkụ 4G niile na-emekarị na mpaghara Europe: (B1, B3, B7, B20), yana 3G @ 21 Mbps, HSPA + (900/2100) na n'ezie GPRS / GSM (850/900/1800/1900). Anyị nwekwara GPS na A-GPS yana WiFi 802.11 a/b/g/n/ac. 2.4GHz na 5GHz jikọtara ya na njikọta Bluetooth 5.0.
Ọ na-adọta uche anyị na anyị na-aga n'ihu na nhọrọ nke nwee obi ụtọ na redio FM, ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ ga-amasị ụfọdụ ngalaba nke ndị ọrụ. N'aka nke ọzọ, tray nke mbughari ga-ekwe ka anyị tinye kaadị NanoSIM abụọ ma ọ bụ gbasaa ebe nchekwa ruo 256GB ọzọ.
Anyị nwere ihuenyo 6,1 sentimita asatọ, IPS LCD panel nke nwere nchapụta zuru oke, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ghara ịdị na-egbuke egbuke n'ọnọdụ dị n'èzí nwere oke ọkụ eke. Ọ nwekwara akụkụ akụkụ nke 19,5: 9 na 16,7 nde agba, ihe niile na-enye HD + mkpebi, ya bụ, 1560 × 720, na-enye onye ọrụ njupụta nke 282 pikselụ kwa inch.
Ihuenyo nwere nhazi agba zuru oke na panel nke doro anya na ọnụ ala. Ụda ahụ, site na otu ọkà okwu, dị ike nke ukwuu mana enweghị agwa (n'ihi ọnụahịa doro anya).
N'ihe gbasara nnwere onwe anyị nwere a 3.000 mAh batrị, ọ bụ ezie na n'ihi ịdị arọ nke ngwaọrụ ahụ, anyị ga-eche na ọ nwere ike ịbụ karịa. Anyị enweghị ozi gbasara ọsọ nchaji, ma ọ bụrụ na anyị gbakwunye na ọ dịghị etinye n'ime igbe ahụ (n'agbanyeghị size) ọ dịghị ike nkwụnye, n'ihi na anyị nwere zuru okè oké ifufe.
Otú ọ dị, l3.000 mAh na-enye nsonaazụ dị mma maka otu ụbọchị na ọkara ma ọ bụ ụbọchị abụọ na-eburu n'uche ikike teknụzụ nke ngwaọrụ ahụ yana na Sistemụ Ọrụ dị ọcha nke ukwuu, yabụ na anyị agaghị enwe usoro nzuzu na ndabere.
Nwee igwefoto n'azụ 13MP nwere ike ịdekọ na mkpebi FullHD (n'elu ihuenyo), enweghị ọnọdụ abalị ma ọ bụ ike mmegharị nwayọ. Maka akụkụ nke ya, igwefoto n'ihu nwere 8MP maka ihe karịrị selfies zuru oke. O doro anya, Igwefoto nke SPC Smart Ultimate a dabere na ọnụ ala ya dị ala na ebumnuche ya abụghị ihe ọzọ karịa inwe ike ịkekọrịta ụfọdụ ọdịnaya na netwọkụ mmekọrịta wee wepụ anyị na nsogbu.
Nke a SPC Smart Ultimate Ọ na-eri naanị 119 euro, ma amaghị m ma ị ga-enwe ihe ọzọ n'uche. A na-achọ ntakịrị ihe n'ọnụ ọnụ nke na-eri obere ego. Anyị na-ahụ onwe anyị onye na-azọpụta ndụ, ekwentị na-enye anyị ohere ịkpọ oku n'ọnọdụ dị mma, na-eri ọdịnaya multimedia na nyiwe isi na-enweghị ụdị ọ bụla nke siri ike ma soro ndị anyị hụrụ n'anya na-ekwurịta okwu site na ngwa kachasị ewu ewu, ọ dịghị ihe ọzọ.
Ọ na-enye ngwaike dị elu nke ọnụahịa ahụ, na-emegide Xiaomi's Redmi nso, mana na-enye anyị ahụmịhe dị ọcha kpamkpam, na-enweghị ndị mgbasa ozi, mgbasa ozi ma ọ bụ ngwa na-adịghị mkpa. Ma ị chọrọ ekwentị maka ụmụntakịrị, maka ndị agadi ma ọ bụ naanị ngwaọrụ nzọpụta nke abụọ, SPC Smart Ultimate a na-enye gị kpọmkwem ihe ị na-akwụ maka ya.
Ihe na: 28 March nke 2022
Mgbanwe ikpeazụ: 27 March nke 2022
OS dị ọcha kpamkpam
Ihe dị arọ
panel bụ HD
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » SPC Smart Ultimate, ezigbo nhọrọ dị oke ọnụ ahịa
ILIFE A11, ihe ọzọ nwere ọtụtụ atụmatụ na ọnụ ahịa dị mma [Nlebaanya]